तपाइँको वेबसाइटहरूको यसको पूर्ण क्षमतामा पुग्नको लागि जस्तो सजीलो गर्न सजिलो छैन। र म पक्का छु कि तपाईंले सायद यो महसुस गरिसक्नु भएको छ। तपाइँ स्थिर तरिकाले कामहरू गरिरहनुभएको छ भनि निश्चित गर्न स्थिर निगरानी, ट्वीकिंग र विश्लेषण लिन्छ। धेरै पटक यस्तो समीक्षा राम्रो हुन्छ जब यो पेशेवरहरू द्वारा गरिन्छ जुन तपाइँको वेबसाइटमा के खोज्ने भनेर जान्दछन्। उद्यमीहरूको हैसियतमा, हामी निश्चित छौं तपाई विश्वास गर्न आउनुभएको छ कि तपाई आफैले काम गर्नु उत्तम हो। यद्यपि कुनै पनि टापु होईन। तपाइँलाई राम्रो महसुस गर्न, Semalt को साथ, तपाइँ तपाइँको वेबसाइटलाई उत्कृष्ट बनाउन हामी लिने सबै चरणहरू बारे अवगत हुनुहुन्छ।
त्यसोभए यो नसोच्नुहोस् तपाईले आफ्नो वेबसाइटलाई हाम्रो नियन्त्रणमा राख्नु भएको छ तर यसलाई साझेदारीको रूपमा लिनुहोस्। यस तरीकाले हामी तपाईंको दृष्टिलाई तपाईंको वेबसाइटमा ट्रान्सफर गर्न सक्दछौं र सुनिश्चित गर्न सक्दछौं कि तपाईं जैविक रूपमा सीसा उत्पन्न गर्नुहुन्छ।
एसईओ अप्टिमाइजेसनको आधारभूत कुरा बुझ्न, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं हाम्रो साइट अन्वेषण गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्दछौं भनेर जान्न मद्दत गर्न हामीसँग शैक्षिक सामग्री धेरै छ।
यहाँ, हामी वेबसाइटहरूको विस्तृत विश्लेषणका लागि आवश्यक सबै उपकरणहरू छलफल गर्छौं। यसले केवल तपाईंको गर्दैन तर तपाईंको प्रतियोगिता पनि समावेश गर्दछ। यसले तपाइँको वेबसाइटमा कुञ्जी शव्दहरूको प्रयोग फेला पार्दछ, र यसले तपाइँको कुञ्जी शब्दहरूलाई पनि प्राथमिकता दिन्छ। हामी तपाइँको ट्राफिक ड्राइभि page पृष्ठ देखाउन हामी अगाडि जान्छौं (यो पृष्ठ जुन प्रायः व्यक्तिहरू भ्रमण गर्छन्), र हामी जैविक खोज परिणाममा तपाइँको स्थान निर्धारण गर्दछौं।
जब हामी तपाईंको प्रतिस्पर्धाको अन्वेषण गर्छौं, तब हामी पत्ता लगाउँदछौं कि तपाईं केमा कमी हुनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धा मेट्रिक्सको अध्ययनले हामीलाई तिनीहरूको ट्राफिकको बढ्दो संख्याको पछाडिका कारणहरू बुझ्न अनुमति दिन्छ। हामी तपाईंको ज्ञानमा तपाईंको साइटमा लागू गर्दछौं।
हामी तपाईंलाई बुझाउन मद्दतको लागि चीजहरू व्याख्या गर्न र भ breaking्ग गर्नमा गर्व गर्दछौं। हामी "I do you look दृष्टिकोण" लाई मन पराउँदैन। यसको सट्टा, हामी यसलाई एक साझेदारीको रूपमा लिन्छौं। यस तरीकाले, हामी दुबै रसायनिक रसायन विज्ञान प्रयोगशालामा "लाक्षणिक रूपमा" मिसाउँछौं र हामी सबै रमाईलो चीजहरू बौद्धिक विद्यार्थीहरूका लागि छोड्दैनौं।
परिभाषा द्वारा, SERP खोज इन्जिन परिणाम पृष्ठ हो। यी पृष्ठहरू खोज इञ्जिनहरू द्वारा प्रदर्शित हुन्छन् जब प्रयोगकर्ता वा केस सेमेल्टले अनुरोध गर्दछ। यस परिणामको प्राथमिक उद्देश्य तपाईंको वेबसाइटमा कुञ्जी शब्दहरू कसरी कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्नु हो।
SERP तपाईंको वेबसाइटको रिपोर्ट कार्ड हो। यसले एक शीर्षक, तपाइँको वेब पृष्ठमा लिंक, र छोटो वर्णन समावेश गर्दछ। यो वर्णनले देखाउँदछ जहाँ कुञ्जी शब्दहरूले पृष्ठमा सामग्रीहरूसँग मेल खान्छ। यसको मतलब यो हो कि तपाईंसँग कार डीलरशिपमा वेबसाइट छैन, र तपाईंको कुञ्जी शव्दहरू फिश, ओशन, एक्वेरियम, आदि हुन्। तपाईंले पोइन्ट पाउनुभयो। जुनसुकै कुञ्जी शव्दहरू तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने सेवाहरूसँग पत्राचार गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि होईन भने, तपाईंको वेबसाइट गलत दर्शकहरु लाई आकर्षित गर्न जारी राख्नेछ।
यस रिपोर्टमा समावेश विवरणहरूका कारण यो प्राय: धेरै पृष्ठहरूमा आउँदछ। जे होस् तपाईले प्रदर्शनमा के प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुहुनेछ, हामी सबै T को पार गरेर र I को थोप्लाएर पूरै जान मनपर्दछौं।
यो नतीजा हेर्दै, पहिलो पृष्ठमा सब भन्दा सान्दर्भिक जानकारी छ। जब तपाईं रिपोर्टको अन्त्यतिर जानुहुन्छ, यसमा डाटाको प्रासंगिकता घट्छ जब सम्म तपाईं आफ्नो मन जारी राख्नुहुन्न। विज्ञापन मा वा जीवन मा वास्तव मा केहि जस्तै, सबै भन्दा महत्वपूर्ण चीजहरू पहिले आउँछन्।
अन्तमा, SERP ले तपाइँको वेबसाइटको साइटहरूको कक्षाकोठामा लिने स्थिति देखाउँदछ। र तपाईले कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग गरेर जैविक रूपमा सिसा उत्पन्न गर्नुहुन्छ, तपाईले के गलत गर्दै हुनुहुन्छ र कुन कुरा समायोजन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ। के गलत हो भनेर थाहा पाएर, हामी कहाँ काम गर्ने जान्दछौं।
त्यहाँ SERP का चार घटकहरू छन्। हामीसँग भुक्तान गरिएको विज्ञापनहरू, जैविक खोजी परिणामहरू, स्थानीय खोज परिणामहरू, र सम्बन्धित खोजीहरू छन्।
भुक्तान गरिएको विज्ञापनहरू: यो अकार्बनिक यातायात प्राप्त गर्ने एक तरीका हो। यहाँ, तपाइँ Google लाई भुक्तान गर्नुहुन्छ यसमा दर्शकहरूको ध्यान आकर्षित गरेर तपाइँको वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्न। यस तरिकाले, तपाईंको साइट दृश्यहरू प्राप्त गर्दछ, तर यसले तपाईंलाई सधैं डो always्याउँदैन। र, त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि जब तपाईं यी विज्ञापनहरूको लागि भुक्तान रोक्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो साइट मा उच्च यातायात जारी राख्नुहुनेछ।
अर्गानिक खोज परिणाम: यो Semalt यो सबै लेखिएको छ। यो तब हुन्छ जब तपाईं एसईओ प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईंको साइटमा प्राकृतिक रूपमा ट्राफिक आकर्षित गर्न। जैविक खोजी परिणामहरू विश्वासयोग्य मानिन्छ। एसईओ को एक व्यावसायिक प्रयोगको साथ, तपाइँको गिग सामान्यतया गुगलको शीर्ष पृष्ठहरूको शीर्षमा हुन्छ। यसले तपाईंको वेबसाइटलाई यी क्लिकहरूलाई ग्राहकमा रूपान्तरण गर्ने राम्रो मौका दिन्छ।
स्थानीय खोज परिणामहरू: यहाँ, तपाईंले एक सूची, नक्सा, र खोज दायरा भित्रै व्यवसायका लागि सम्पर्कहरू देख्नुहुनेछ। खोज त्रिज्या शर्तों को एक गुच्छा र उपयोगकर्ता को प्राथमिकता द्वारा निर्धारित गरीएको छ। यो किन गुगलको व्यवसायिक पृष्ठ भित्र कम्पनीहरूले सेट अप गर्न आवश्यक छ।
सम्बन्धित खोजीहरू: सम्बन्धित खोजहरू प्राय: बेवास्ता गरिन्छ। यी सानो बाकसहरू हुन् जुन तपाईंले परिणाम पृष्ठको तल देख्नुभयो तपाईंले केही खोज्नु भए पछि। यो खोज बक्समा प्रयोग गरिएको कुञ्जीशब्दहरूको आधारमा सिर्जना गरिएको हो।
यद्यपि गुगल, बिंग, र याहू जस्ता ठुलो खोजी ईन्जिनको SERP मा धेरै विस्तारित परिणाम सुविधाहरू समावेश हुन सक्छ। ती तत्वहरूमा तपाईंको स्निपेट, छविहरू, नक्शा, परिभाषा उत्तर बाकस, इत्यादि जस्ता सामग्रीहरू सामेल छन्।
प्रयोगकर्ता खोज स्ट्रि asको रूपमा पनि परिचित, यो शब्द हो वा शब्दहरूको शब्दहरूले खोज बक्समा टाइप गर्दछ। के तपाईंलाई थाहा छ गुगलमा केहि पनि कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन प्रयोगकर्ताले खोजी गर्न सक्दछन्, तर किवर्ड अझै पनि कायम छन्।
तर यदि खोजी ईन्जिनहरूले एकल प्रकारको प्रयोगकर्ताले केमा निर्भर गर्दछ, धेरै साइटहरूले कहिले दिनको उज्यालो देख्न सक्दैनन्। त्यसो भए, खोज ईन्जिनहरूले यसको एल्गोरिथ्म र यसको खोज इञ्जिनको समग्र बुद्धि परिवर्तन गर्दछ।
खोजी क्वेरी अब सम्भव छैन केवल एक प्रयोगकर्ताले खोजी गरेकोमा आधारित। यसको सट्टामा, कम्पनीहरूले अन्य चरहरूमा Google फ्याक्टरलाई मन पराउँछन्। समयसँगै, प्रसंग केवल शब्दहरूसँग मिल्दोदेखि बौद्धिक सोचमा बढेको छ। यस तरिकाले, हिज्जे शब्दहरू सहि छन्, र सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरू पनि प्रदर्शित हुन्छन्।
सामग्रीले देखाउँदछ कि गुगलले तपाईंको वेबसाईटलाई कसरी व्यवहार गर्दछ। के तिनीहरूले यसलाई अद्वितीय स्रोत मान्दछन् कि गर्दैनन्? यहाँ, तपाईको सामग्री कती अनौंठो छ त्यसको सहि प्रतिशत जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै विशेष वा फरक हुन चाहन्छौं, र यो सुविधाले हामीलाई त्यो प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सामग्रीको साथ, तपाईंले सिक्नुभयो जुन तपाईंको पाठको अंशहरू चोरी हुन्छन्, र तपाईं प्राथमिक स्रोतमा हेर्नुहुन्छ।
कोही पनि टापु होइन, त्यसैले केहि साहित्यिक चोरीको अपेक्षा गर्नुहोस्। यो हाम्रो काम हो, यद्यपि तपाईंको पाठलाई यथासम्भव अनौंठो र विशेष बनाउने। जे होस् तपाई अन्य स्रोतहरुबाट डाटा स gather्कलन गर्नुहुन्छ, तपाईले यसलाई आफ्नो बनाउनु पर्छ, तपाईको केही थप्नुहोस् र यसमा कम्पनी गर्नुहोस्। यसले तपाइँको पाठकहरूलाई तपाइँको कम्पनी र ब्रान्डमा राम्रोसँग जडान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
हाम्रो प्रयोगकर्ता-मैत्री ईन्टरफेसको साथ, हामी एक समय मा धेरै वेबसाइटहरू प्रबन्ध गर्न सक्दछौं। गुगलमा तपाईंको डोमेनहरू वा यूआरएलहरू सबमिट गर्नाले हामी उनीहरूको प्रदर्शनलाई सजिलोसँग ट्र्याक गर्न सक्छौं। गुगल वेबमास्टरको साथ तपाईसँग सबै उपकरणहरू छन् तपाईको साइटलाई मोनिटर गर्न र सुधार्न आवश्यक छ। गुगल वेबमास्टरको सेवाहरूको मजा लिन, तपाईले पहिले एउटा खाता बनाउनु पर्छ। गुगल वेबमास्टर कुनै पनि वेबसाइट को सफलता को लागी एक महत्वपूर्ण उपकरण हो। यो जहाँसम्म तपाइँको वेबसाइटले फोन र ट्याबलेटमा प्रदर्शन गर्दछ देखाउनको लागि जान्छ, तपाइँसँग लि to्क हुने अन्य साइटहरू हेर्नुहोस्, र यसले तपाइँको जिज्ञासाहरू मूल्या evalu्कन गर्दछ।
गुगल वेबमास्टरले कसरी तपाईंको वेबसाइटको प्रदर्शनलाई अनुगमन गर्न सक्छ?
यसले प्रमाणित गर्दछ कि गुगलले तपाईंको वेबसाइटमा सामग्री पहुँच गर्न सक्दछ
यसले तपाइँको वेबसाइटहरूमा पृष्ठहरू थप्न र हटाउन अनुमति दिन्छ
यसले तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइट मूल्याate्कन गर्न र तपाईंको पाठकहरूको लागि उत्तम अनुभव प्रदान गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउँन मद्दत गर्दछ।
तपाइँ तपाइँको वेबसाइटलाई यसको परिणाम परिणामहरुमा बाधा पुर्‍याई राख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं मालवेयर वा स्पाम समस्याहरू पत्ता लगाउन र हटाउन सक्नुहुन्छ जुन क्र्याकबाट चिप्लिएको हुन सक्छ यदि कुनै अन्य तरिकामा खोजी गरियो भने।
गुगल वेबमास्टर वेबसाइटहरूको विश्लेषण गर्ने बखत एक आवश्यक उपकरण हो। यसले हामीलाई कहाँ र के गर्ने भनेर देखाउँदछ।
यो विश्लेषण गर्दछ कसरी तपाईंको वेब पृष्ठहरू छिटो लोड हुन्छन्। गुगलले तपाईको पृष्ठ वा वेबसाईटले गुगलका आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ कि भनेर निर्धारण गर्न यो विश्लेषण प्रयोग गर्दछ। यहाँ, तपाईंलाई अवस्थित त्रुटिहरू पनि देखाइनेछ जुन तपाईंले आफ्नो वेबसाइटमा फिक्स गर्न आवश्यक पर्दछ साथै तपाईंको वेबसाइटहरू कसरी सामान्य सुधार गर्ने।
सामान्यतया, तपाई एक वेबसाइट रुचाउनु हुन्छ जुन पृष्ठ छिटो लोड हुन्छ। १० सेकेन्ड भन्दा लामो कुनै पनि कुराले दिनभर महसुस गर्न थाल्छ। यसै कारण छिटो लोड गर्ने वेबसाइटहरू तपाइँ र तपाइँको दर्शकहरूको लागि उत्तम हो। गुगलले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरू खुशी रहेको चाहन्छ, जसको अर्थ उनीहरूलाई छिटो वेबसाईटहरू चाहिन्छ। त्यसोभए तपाईंको वेबसाईट गुगलले तपाईंको वेबसाइटलाई क्रमबद्ध गर्न सकेसम्म चाँडो हुनु आवश्यक छ। र हामीलाई यो आवश्यक छ कि तपाईंको वेबसाईट शीर्ष खोजीहरूमा देखा पर्नेछ, तपाईंको व्यवसायलाई बढ्नको लागि बढी अवसरहरू प्रदान गर्दै।